Last updated: Chivabvu. 25 2019 | 1
Apo Notre Dame kuti nhabvu nyeredzi Manti Te'o akasangana musikana wake Twitter haana kumbogara vanofungidzirwa zvakanga kuuya rinotevera. musikana wake akafa panguva pakati ake nhabvu mwaka, kana kanenge akaudzwa izvi. chaizvoizvo, akanga catfished ne shamwari, vachisiya Te'o kugumbuka uye nekunyara. Nokuti vaya vasingazivi chii "catfishing" ndizvo, apo munhu paIndaneti anonyepedzera kuti vari munhu havasi kuti kana kubira mari kana zvimwe zvinhu kunze vasingafungiri vanobatwa. mu 2011, FBI yakafungidzira kuti kumativi $50.4 miriyoni yakarasika muna catfishing uori hukuru hunoitwa nevezvoutano kusimbisa kwokuomerwa zano iri.
Sei kuti uzvidzivirire catfishing uori hukuru hunoitwa nevezvoutano
Catfishing nyore kuziva nekungochitarisa zvinhu vanoita sevasinganzwisisi anoenderana kukwira. kazhinji, katsi Fisher vachakuudza nyaya kuti havambokwanisi kunowirirana. Imwe nzira huru kusvibisa Kunyepa Profile ndiko kukumbira shamwari kana ivo zvechokwadi vanoziva munhu (kana vanofungidzirwa katsi Fisher ndiye shamwari neshamwari dzako paIndaneti). Kana pasina munhu waunoziva nokusingaperi akasangana munhu zvingada kuti havasi ivo vanoti. Nguva dzose pfungwa yakanaka kana uchinzwa sokuti uri kuva katsi hove kutsigira tarisa kwomunhu nhoroondo uye wakarurama ona kana uchikwanisa kuwana chero mashoko pamusoro pavo.
Dzidza zvakawanda pamusoro catfishing uye kukuvara kunogona kukonzera iri yakajeka iri dzidzo kubva instantcheckmate.com.
Kudzivisa Being Catfished Infographic